अमेरिका गएका मानिसहरू किन नेपाल फर्कन सक्दैनन ?
NepalPsycho 1012 days ago
Visitor from US is reading अमेरिका गएका मानिसहरू किन नेपाल फर्कन सक्दैनन ?
Visitor from US is reading Akshay Kumar Interview in Nepal
Visitor is reading Free QA training and JOB placement
Visitor is reading CAN-USA
Posted on 09-25-17 12:59 PM Reply [Subscribe]
महेश भट्टराई, कोलम्बिया , अमेरिका
नेपालमा हुनेहरूले अमेरिका गएको मानिस अब नेपाल फर्कदैन, उतै हराउछ भन्छन । बास्तब मै DV पर्ने को त कुरै छाडौ, बिध्यार्थी र टुरिष्ट भिषामा जानेहरू समेत उतै हराएका हुन्छन र यो कटु सत्य पनि हो ।
अमेरिका बस्नेले पनि जागिर, घर ब्यबहार केहि बर्ष पछि मिलाएर छिटै नेपाल फर्कने सपना बुनेर बसेका हुन्छन । गफ गर्दा सधै फर्कने कुरा अलापछन । अघि नमिले पनि retire भए पछि त पक्कै फर्कने भनि दिन गन्ती गरिरहेका हुन्छन ।
तर किन भने जस्तो हुदैन ? किन नेपाल फर्कन सक्दैनन त अमेरिकाका नेपालीहरू ?
१ अत्याधुनिक भौतिक सुबिधा : नेपालमा हामी सधैभरि आधारभूत आबस्यकताको लागि दैनिक जुधिरहेका हुन्छौ । पानी, बिजुली, ग्यास, डिजेल … यी सबै बाट झन्झट मुक्त भै बस्ने रहर कसलाई नहोला र ! अत्याधुनिक सुख सुबिधाहरू कार, e-net, सड़क, महल, पार्क, समुन्द्र, air conditioning युक्त घर , vacation …. सुबिधाहरूको कारणले मानिसहरू नेपाल फर्कन सक्दैनन । दुई दिनको नेपाल visit को तितो अनुभव भुल्न सक्दैनन ।
२ पारिवारिक बन्धन : बिस्तारै आफ्ना आफन्त परिवार छोराछोरी, नातीनातिनाहरू सबै यतै भै पछि कस्को र के का लागि नेपाल जाने भन्ने प्रस्न अहम हुदोरहेछ । साहूको भन्दा ब्याजको माया नातीनातीना हेरेर बस्ने हुने रहेछ । त्यसैले पनि छोरा छोरी परिबार अमेरिका छाडेर नेपाल फर्कन सक्दैनन ।
३ जागीर वा ब्यबसायको बन्धन : जागीर वा ब्यबसाय बाट काटिने कर र लगानीहरू state, federal, social security, Medicare, retirement plans चटक्क छाडेर जान कसैले पनि सक्दो रहेनछ। जिवनभरको लगानी र मिहिनेत ६५-६७ बर्ष पछि मात्र पाइने सुबिधा छाडेर जान कसैले पनि सक्दो रहेनछ ।
४ Tax file को झन्झट : बर्ष भरि गरेको आम्दानी खर्चको बिवरण सरकारलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ । बर्षको अन्त्यमा गरिने tax file बाट सानों वा मध्यम परिवारले केहि रकम प्राप्त गर्ने गर्छन । सामान्य tax file का लागि IRS का अनुसार कम्तीमा १८३ दिन अमेरिकामा नै बसेकै हुनु पर्छ । तेसै कारणले पनि नेपाल लामो समय बस्न सक्दैनन ।
५ Home loan/ Mortagage: धेरै जसो घर १५,२०,३० बर्षे उधारों मै किनिएको हुन्छ वा किन्ने चलन छ । उक्त किस्ता, पानी, बिजुली,association र अन्य खर्चहरू समय मै बुझाउनु पर्ने हुन्छ ! नबुझाएमा क्रेडिट बिग्रने हुन्छ । risk लिएर नेपाल बस्न कोही चाहदैनन ।
६ Student loan/ business loan : धेरै जसो बिधार्थीहरूले student loan लिएर पढेका हुन्छन । तेस्तै ब्यापारीले ब्यापारीक ऋण । ऋण तिर्नु पर्ने बाध्यताको कारणले पनि नेपाल फर्कन सक्दैनन । नतिरेमा उसको भविष्य नै नष्ट हुन सक्छ ।
७ Investment : कति मानिसहरू ले retirement program , insurance, business, shares/bonds ….हरूमा लगानी गरेका हुन्छन । उक्त रकम डुब्ने डरले पनि नेपाल फर्कन डराउछन ।
८ Pension/ retirement benefits : जिबनभर काम गरेर आफ्नो pension र retirement benefits, medical , social security सुबिधा लिएर बुढेसकालमा सुख संग बस्ने सपना कस्को हुदैन र ! यो कुरा नेपालमा बसेर पुरा नहुने हुनाले पनि फर्कन चाहदैनन ।
९ Relationship and communication gap : धेरै बर्ष बिदेश बसि सके पछि नेपालमा हुने हरूले यीनीहरू त बिदेशी हुन , यी त दुई दिनका पाहुना ! यीनको संगत नगरे कै जाती भन्न थाल्छन । आफन्त, साथीभाई, छरछिमेकी सबै संगको सम्बन्ध टाढिदै जान्छ । नया पुस्ताले चिन्न समेत छाडी सकेका हुन्छन । यीनै कारण ले पनि नेपाल फर्कने हिम्मत गर्दैनन् ।
१० Busy life style and culture : केहि बर्ष बिदेश बसि सके पछि बेलीचाली ब्यबहार , रहनसहन, लगाई खवाई सबै फरक परिसकेको हुन्छ । आफ्नो गरेर खाने, सिधा स्पष्ट बोल्ने, privacy का कुरा, सरसफाई ….. यस्ता धेरै कुराहरू मा स्वत: परिबर्तन भै पस्चीमी सभ्यतामा ढलिसकेका हुन्छ । जुन कुरा झट्ट ब्यबहारमा नेपालमा पचाउन र आफुलाई परिबर्तन गर्न गारो हुन्छ ।
११ सामुदायिक बन्धन : अमेरिकामा पनि नेपालीहरूको बस्ती दिनानुदिन बाक्लिदो छ । सबै जसो नेपालीहर हरेक गाऊँ र बस्तीहरूमा आ आफ्नै समुह संगठनहरूमा आबद्द भै एक आपसमा बाधी सकेका हुन्छन । सुख दुखमा साटासाटको लागि एक आपसमा नया सम्बन्ध गासिसकेका हुन्छन । यो सबन्ध चटक्क छाडेर जान सक्दैनन ।
१२ नेपालको कानुन , भ्रष्टाचार र अप्ठ्याराहरू : नेपालमा NRN हरूलाई दोहोरो नागरिकताको कानुन बनेको छैन । आफ्नै देश फर्कदा टुरिष्ट भएर डलर तिरेर बस्ने रहर कसैलाई हुदैन । संम्पत्ती ख़रीद बिक्री र ब्यवसाय गर्न पनि सहज छैन । सानों तिनो काम गर्न पनि धेरै पटक धाउनु पर्ने, चाकडी गर्नु पर्ने वा घुष खुवाउनु पर्ने बाध्यता छ । घर मै बसेर फोन, इमेल वाenet को माध्यमबाट सजिलै काम गर्ने अब्यस्त भएका हरू यो झन्झट झेल्न पटक्कै मन पराउदैन ।
अमेरिकामा बस्नेहरूले जति नै गफ चुटे पनि चटक्कै छाडेर नेपाल बस्न ठुलै हिम्मत र मुटु बनाउनु पर्ने हुन्छ । भन्न जति सजिलो छ, ब्यबहारमा सजिलो भने पटक्कै छैन ।
अमेरिका आउनु भन्दा अगाडी एक मेरा साथीले भनेका थिए “अमेरिका भनेको एक दलदल हो, यो दलदल मा फसे पछि निस्कन सजिलो पटक्कै छैन र त पनि यहि दलदलमा फस्नेछस ।”
र पनि म भने नेपाल फर्कने सपना बुनेर बसेको छु ।
Posted on 09-25-17 1:41 PM [Snapshot: 67] Reply [Subscribe]
कथा को बिसयबस्तुमा हरेक अमेरिका छिर्ने मात्र होइन खाडि मुलुक छिर्ने को पनि तेस्तै तेस्तै गति छ | फरक एति मात्र हो अमेरिका छिर्नेले अनगिन्ती सुबिधा पाएको हुदा दल दल बात निस्कने भन्दा पनि दल दलमै रमेर बसेको कारण हो , पिउनलाई बनाएको बहाना जस्तै |
Posted on 09-26-17 10:27 PM [Snapshot: 560] Reply [Subscribe]
बुढाहरु स्तिर्रिप कलब धाएर अनि युवाहरु बियर र छम्मासित् मस्केर भाको पैसा उदाएछी घण्टाजस्तो नेपाल को फर्कोस त |